Uru nke PVC ala na ụlọ ọrụ mmepụta ihe-News-Topflor China nwere oke
Uru nke PVC ala na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Echiche:24 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-04-13 Mmalite: Saịtị
Gini mere ugbu a, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe a na-eji eme ihe eji eji ejiji eji arụ PVC ala? Olee uru ya bara? Isiokwu na-ewebata zuru ezu uru nke ịkwanyere plastic flooring na nri ụlọ ọrụ noo ma e jiri ya tụnyere ọdịnala flooring. Site na mmepe nke teknụzụ dị elu, ụlọ ọrụ na-emeziwanye ihe n'ụlọ na-agbanwe kwa ụbọchị. Fọdụ ihe ọhụụ na-apụta iji dochie ihe eji achọ mma ụlọ gara aga, nwere njirimara pụtara ìhè na ọnụ ala dị ala. , Bụ ngwaahịa mmanye na nke dị mkpa iji nweta iru eru nke usoro nnweta ahịa.
The uru nke ịkwanyere nri factory ogbako ala
1: Obere carbon na nchedo gburugburu ebe obibi
Isi akụrụngwa maka imepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na PVC ụlọ plastik bụ polyethylene. Polyethylene bu ihe eji eme ka enweghi ike imeghari maka nchekwa gburugburu ebe obibi. Ejila ya rụọ ọrụ kwa ụbọchị, dị ka arịa kichin, akpa mmiri na-ebu mmiri, na ihe ndị ọzọ, nchekwa gburugburu ya agaghị echegbu onwe gị.
2: Akwa ekwedo na ibu eguzogide
Ihe ala nke ulo oru ihe omuma ihe nke PVC bu oke nro, ya mere ductility di ezigbo nma. Ọ nwere magburu onwe ductility idozi n'okpuru mmetụta nke nghọta ihe. Ihe na-ekpuchi mmiri na-enweghị mmiri dị nro na ductile. Kwụ ya dị elu dị mma ma kpọọ ya "ọrụ ihe eji arụ ụlọ." Peptide ", na mgbakwunye, ala ụlọ ọrụ mmepụta ihe nri PVC nwere nguzogide mmetụta siri ike, ma nwee ductility siri ike iji rụkwaa mbibi mmetụta nke ihe a kwụgidere, ọ bụkwa Ọ bụghị ihe dị mfe imebi ihe. Onye ọ bụla kwesiri ịhụta ma ọ bụ hụ ka ụfọdụ ihe kwụgburu na-akụ ala taịl nile nke ala. A na-akụ paịlị ndị a na-ebipụtaghị nke ọma ma sie ike, mana PVC dị iche, ọ bụghị naanị na ọ gaghị adị mfe itigbu, mana ọ dịkwa Ọdịdị dị mma kachasị mma maka ịtọpụ ụlọ.Ọmarịcha ụlọ ọrụ mmepụta ihe nri PVC nwere ike ibelata mbibi nke okporo ụzọ na ahụ, ma nwee ike gbasaa mmetụta dị n'ụkwụ.
3: Super eyi eguzogide
Elu ala nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nri PVC nwere ihe pụrụ iche na -emepụta akwa mkpuchi na-eguzogide nke teknụzụ ọhụụ mepụtara. The pụrụ iche edozi super wear na-eguzogide oyi akwa n'elu ụlọ n'ụzọ zuru ezu ana achi achi magburu onwe wear-eguzogide nke n'ala ihe onwunwe. A ga-etinye ala nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nri PVC ihe owuwu ahụ na-eguzogide ọgwụ maka afọ 5-10 n'okpuru ọnọdụ niile dịka ọkpụrụkpụ. Okpukpo na ogo nke akwa na-eguzogide akwa na-ekpebi oge ojiji nke ala nke ulo akwukwo ihe oriri PVC. Ihe nyocha nke ọkọlọtọ na-egosi na ọkpụrụkpụ bụ 0.55mm. Enwere ike iji akwa akwa akwa na-eyi akwa ihe karịrị afọ 5 n'okpuru ọnọdụ niile dị mma, na paịpụ akwa oyi akwa 0.7mm zuru ezu maka ihe karịrị afọ iri, ya mere ọ dịkwa mma na-eguzogide ọgwụ.
4: Super mgbochi skid na ala
The-eguzogide oyi akwa oyi akwa n'elu ala nke ịkwanyere nri factory omumuihe nwere pụrụ iche n'ala ileghara eguzogide, ma e jiri ya tụnyere izugbe n'ala ihe onwunwe, na ịkwanyere nri factory ogbako ala na-eche ihe astringent n'okpuru ọnọdụ nke nnyapade mmiri, na ọ bụ obere na-amị amị. , ya bụ, ka ị na-ezute ya. Ndị ọzọ astringent mgbe mmiri. Tụkwasị na nke ahụ, ala nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke PVC adịghị mfe ọkụ ma nwee ike igbochi ọkụ; na mgbakwunye, ala nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nri PVC nwere ihe eji eme ihe n'ozuzu nke na-enweghị ike iji tụnyere mmetụta mkpuchi mkpuchi ụda. Mkpokọta ya nwere ike iru mkpo ụda 20. Olu ụda dị n'okporo ụzọ na-enye gị nsogbu. Ala nke ulo akwukwo ihe oriri nke PVC nwere ike igosi gi ebe obibi di nma karie.
5: Ọ dị mfe ịkpụ na mado
Enwere ike belata ya na mma eji mpempe akwụkwọ. Na mgbakwunye, enwere ike ịde ya dị iche iche nke akụrụngwa. Jiri amamihe nke onye na-emepụta ihe dị n'ime ụlọ mee ka ebe obibi gị bụrụ ebe nsọ nke teknụzụ plastik. Ọ dịghị mkpa ịgwakọta ngwa agha, na elu ụzọ dị mma. Enwere ike itinye akwụkwọ mgbochi gburugburu ebe obibi mgbe awa 24 gachara. Okpomọkụ nyefe, oyi na-ekpo ọkụ ịkwanyere nri factory ogbako ala nwere magburu onwe okpomọkụ nyefe arụmọrụ na edo okpomọkụ dissip. Na Europe, America na Japan, South Korea na mba ndị ọzọ na mpaghara, ịkwanyere nri factory ogbako ala bụ họọrọ ngwaahịa maka ala kpo oku na okpomọkụ nyefe flooring, karịsịa na kwesịrị ekwesị Oké oyi na mpaghara na ugwu China.
Uru nke PVC mkpọchi ala
Nduzi ọgwụ ụlọ na nhicha ụlọ ọgwụ